माताको ठगी धन्दा ! तिम्रै आमा बो’क्सी हो भन्दै विदेशमा कमाएको ३ लाख पैसा, महंगो मोवाइल लिएर फरार (भिडियो हेर्नुस्) – Khabaarpati
October 5, 2020 October 5, 2020 goodmamLeaveaComment on माताको ठगी धन्दा ! तिम्रै आमा बो’क्सी हो भन्दै विदेशमा कमाएको ३ लाख पैसा, महंगो मोवाइल लिएर फरार (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । आफुलाई भगवानको विशेष शक्ति छ भन्दै दावा गर्ने एक महिलाको विश्वासमा पर्दा दागंमा एक परिवारको सम्पत्ती सकिएको छ । दागंको घोराहीमा एक युवकको परिवारमा एक जना वृद्ध महिलालाई फ सा एर उनको सम्पत्ती सकिदिएकी हुन् । वृद्ध महिलाका छोरा विदेशमा थिए । छोरा विदेशवाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।